Però · Global Voices teny Malagasy
Desambra 2018 8 Lahatsoratra
Oktobra 2017 7 Lahatsoratra
Tantara misongadina mikasika ny Però
Mediam-bahoaka2 herinandro izay
Bolivia3 herinandro izay
Fampitondrana vohoka sa fampamombana ankaterena? Tsy mbola manana fahefana amin'ny vatatenany ny vehivavy peroviana
Fahasalamàna01 Jona 2021
Tantara mikasika ny Però
Nandritra ny taona marobe, tena nanao tatitra betsaka momba ny olan'ny tontolo iainana ny Global Voices, ary iray amin'ireo nifantohan'ny tantara tato aminay ny fomba fiantraikan'ny fandravàna tontolo iainana, ny rohivoahary efa marefo noho ny asan'ny olombelona.
Ny fifohazan'ny ‘indraimihira faharoanjatotaona’ ao Però
Fitantanam-pitondrana 02 Avrily 2021
'Aza taitaitra raha misy ny resaka Lalampanorenana vaovao. Tena ilaina indrindra ny adihevitra amin'izany.'
Tetikasa seranantsambo vaovao tarihan'i Shina ao Pero, miatrika ny fanoheran'ny mponina sy ireo mpiaro tontolo iainana any an-toerana
Shina 19 Marsa 2021
“Teo amin'ny tantaran'i Pero, nipetraka teny amin'izay rehetra tiany ireo fampiasàmbola, rehefa hoe mitondra vola, ary ny fanjakana sy ny governemanta no mamela izany hitranga”
Any Pero, mihira rap manohitra ny herisetra ara-nofo ny tanora tompotany
Hevitra 04 Oktobra 2020
Amin'ny tenirohy #WarmallanAmaraqMamaqa ["Zazavavy, fa tsy renim-pianakaviana"], namoaka ny horonantsarin'ny hira rap ny mpianatra amin'ny lisea hitakiana ny fiarovana ny zazavavy tompotany sady tantsaha.
Ao Però, 23 ora isan'andro ny ho an'ny teny espaniola ary ora iray ho an'ny fiteny tompotany
Foko sy Fiaviana 22 Septambra 2020
Sariohatry ny fanilikilihana nihatra nandritra ny 200 taona izany tsy fahampiana fizaram-potoana ao amin'ny fampitam-baovao izany.
Ekoatora 24 Mey 2020
Mediam-bahoaka 24 Marsa 2020
Costa Rica 15 Marsa 2020
Injeniera Peroviana notolorana ny loka iraisam-pirenena tamin'ny hevitry ny galety miady amin'ny tsy fahampian-drà
Fahasalamàna 27 Febroary 2020
Ahitana singa fototra telo ny galety izay noforonin'ilay injeniera Peroviana Julio Garay ary miady amin'ny anemia, aretina mpahazo ny efa ho antsasaky ny ankizy Peroviana.
Taorian'ny fipoahana fiarabe iray nahafaty olona, resahana ao Pero ny fiarovana an-dalambe sy ny fepetra momba ny asa
Fahasalamàna 05 Febroary 2020
Andro vitsy talohan'ny fifidianana solombavambahoaka tao Pero, nisy loza mahatsiravina azo nosorohana tsara nefa niteraka hatezerana sy nanamafy ny firaisankinan'ny vahoaka.